Taliyaha Ciidanka Asluubta oo ka hadlay iska horimaadkii Xabsi... | Universal Somali TV
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa goor dhow ka hadlay iska horimaadkii gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
Taliyaha oo la hadlay Telefishinka Qaranka ayaa sheegay in maxaabiistii xabsiga ee cuntada karineysay ay qoriga kula dhegtay nin askari ahaa oo markaasi gudaha kula jiray, ka dibna ay gudaha xabsiga dagaal ka dhex bilaabeen, sida uu yiri.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in askari kale oo qaybta kore ee ilaalada xabsiga saarnaa ay toogasho ku dileen, ayna ka qaateen qorigii uu haystay, kuwaa oo ku dagaalamayay labadaasi qori oo keliya, sida uu yiri.
Taliyaha oo hadalkiisa uu u muuqday mid aad loo soo xadiday, wax badana u muuqday inuu qarinayo ayaa intaa ku daray inaysan jirin wax intaasi dhaafsiisan oo ka dhacay Xabsiga Dhexe ee Xamar.
General Mahad Cabdiraxmaan Aadan xitaa maanu faah faahin khasaarihii ka dhashay iska horimaadkaasi hubeysan, ee gelinkii dambe ee maanta illaa fiidnimadii caawa ka socday xabsiga ugu weyn Caasimadda Muqdisho.
Kan-xigaMagacyada guddiga baaraya dhacadii Xa...
Kan-horeWararkii ugu dambeeyay iska horimaad ...
55,440,911 unique visits